Kulumkele ukuthinjwa ngabaphuhlisi bakho | Martech Zone
Kulumkele ukuthinjwa ngabaphuhlisi bakho
NgoMvulo, Meyi 12, 2008 NgoLwesibini, Oktobha 4, 2011 Douglas Karr
Kule mpelaveki ndiqale incoko nomculi wasekhaya ebencedisa umphathi wakhe kulawulo lwezicelo zewebhu ezingabaphathi bakhe.
Incoko yathatha ithuba kwaye indawo ethile yaqhubeka malunga nokuhlawula iifizi zophuhliso lweveki ngaphandle kokubona inkqubela phambili kunye nonjiniyela ababesebenza kunye naye. Ngoku umphuhlisi ufuna ukubabiza enye imali yesamba ukugqibezela iprojekthi kunye nemali yesondlo yeveki yokuhlawula ezinye izicelo. Iya isiba mandundu.
Umphuhlisi wagqithisela amagama e-domain ukuze akwazi ukuwalawula. Umphuhlisi ukwabamba isicelo kwiakhawunti yakhe yokubamba. Ngamafutshane, umphuhlisi ngoku ubabambile.
Ngombulelo, owasetyhini endisebenza naye ngokufuna ukufikelela kulawulo kwixa elidlulileyo ukuhlela ezinye zeefayile zetemplate kwindawo leyo. Umphuhlisi wayenokumnika ukufikelela kumda kodwa akenzanga njalo. (Ngevila) wambonelela ngolawulo lokungena kwisiza. Ngokuhlwanje ndisebenzise ukufikelela kogcina yonke ikhowudi yesiza. Ndifumanise ukuba yeyiphi na isoftware yolawulo ayisebenzisayo kwaye ndenza indlela eya kulawulo lwedatha apho ndikwazileyo ukuthumela idatha yezicelo kunye nolwakhiwo lwetafile. Wowu.
Umnini wayecwangcisa ukuhambisa iisayithi kumagama eziko elitsha xa uphuhliso ligqityiwe. Kukhulu kakhulu kuba oko kuthetha ukuba imimandla yangoku inokuphelelwa xa kunokwenzeka ukuba kubekho umsantsa phakathi komqambi kunye nenkampani. Ndikubonile oku kusenzeka ngaphambili.
Ezinye iingcebiso ukuba uza kufumana iqela lophuhliso lwangaphandle:
Bhalisa amagama akho esizinda kwigama lenkampani yakho. Akukubi ukuba unomphuhlisi wakho njengoNxibelelwano lobuGcisa kwiakhawunti, kodwa ze dlulisa ubunini besizinda kuye nakubani na ngaphandle kwenkampani yakho.
Ukusingatha isicelo sakho okanye indawo yakho
Kulungile ukuba umphuhlisi wakho abe nenkampani yokubamba kwaye angakubamba indawo yakho, kodwa ungayenzi. Endaweni yokuba ubuze iingcebiso zakhe malunga nokuba ungasifaka phi isicelo. Kuyinyani ukuba abaphuhlisi baqhelana nesoftware yolawulo, iinguqulelo, kunye nendawo yezixhobo kwaye ezinokunceda imveliso yakho igqitywe kwakamsinya. Oko utshilo, nangona kunjalo, ungumnikazi weakhawunti yokubamba kwaye ungeze umphuhlisi wakho ngokungena kwakhe kunye nokufikelela. Ngale ndlela, ungatsala iplagi naphi na xa ufuna njalo.
Ikhowudi yakho yeyakho
Sukucinga ukuba yeyakho ikhowudi, uyibhale phantsi. Ukuba awufuni umphuhlisi wakho asebenzise izisombululo owamhlawulela zona ukuba azenze kwenye indawo, kuya kufuneka uthathe isigqibo ngexesha lesivumelwano. Ndivelise izisombululo ngale ndlela kodwa ndiziphuhlisile apho ndigcina khona amalungelo ekhowudi. Kwimeko yokugqibela, ndaye ndathethana ngexabiso lesicelo esisezantsi ukuze kubekho inkuthazo kwinkampani ukuba indinike amalungelo. Ukuba awukhathali nomphuhlisi wakho usebenzisa ikhowudi yakho kwenye indawo, awufanelanga ukuba ubhatale idola ephezulu!
Fumana uluvo lwesibini!
Ayikhathazi iimvakalelo zam xa abantu bendixelela ukuba bathatha iibhidi okanye babonisana nabanye abaqeqeshi. Ngapha koko, ndiyacebisa!
Eyona nto iphambili kukuba uhlawula italente yomphuhlisi wakho kodwa kuya kufuneka ugcine ulawulo kunye nobunini kolu luvo. Yeyakho. Nguwe otyale imali kuyo, obeka esichengeni ishishini lakho kunye nenzuzo ngalo ... kwaye nguwe omele ukuligcina. Abaphuhlisi banokubuyiselwa endaweni kwaye akufuneki babeke isicelo sakho, okanye okubi kakhulu - ishishini lakho, emngciphekweni.
tags: IntengisoibluetoothIalgorithm kaGoogleIifowuni zesmswebsukuthengisa imiyalezoukuthumela imiyalezoUkudityaniswa kwe-sms yokudibanisa
Gcina umxholo wakho utsha! Kubandakanywa neeNkcazo
Ukuhambisa uhlalutyo lwewebhu
Notreally Igama lam
Meyi 13, 2008 kwi-5: 04 PM
Ndingumphuhlisi weapp yewebhu kwaye ndiyavuma uninzi lwamanqaku akho (mhlawumbi onke) kodwa ndingathanda ukucaciselwa # 3.
Ukuphindaphindwa kwesiza okanye isicelo esithengiselwe enye inkampani (okanye okubi kakhulu okhuphisana naye) asikho semthethweni kwaye kufuneka sisoloko sichazwa njengengamkelekanga kwisivumelwano sakho. Nangona kunjalo, ndiye ndavelisa isisombululo esitsha kwiingxaki eziqhelekileyo ngelixa ndisebenza kwiprojekthi yomthengi engenanto yakwenza ne-biz yabo kwaye ayibonisi icandelo lesisombululo sisonke.
Abathengi bafuna inqanaba lephepha kunye nolawulo lwenqanaba lomhlaba oluboshwe kwiindima zomsebenzisi. Ukusebenza "kwebhokisi" yokusebenza kwe-ASP.Net kwenza iimvume zenqanaba lefolda. Ke ndiye ndolula iimvume zendalo zeNet kwaye ndazisa isisombululo njengenxalenye yokufakwa kwewebhu ngokubanzi.
Ndiyakholelwa ukuba banelungelo lokufumana ikhowudi yonke (njengoko kuchaziwe kwisivumelwano) kodwa ndiziva kufanelekile ekusebenziseni indlela efanayo kunye neziqwengana zekhowudi ukufezekisa olu lwandiso kwiiprojekthi ezizayo.
Ndikwenzile oku ngelixa ndaluswa ngaphandle yinkampani yabacebisi. Ngaba inkampani ebonisanayo ingaba nelungelo ngokoluvo lwakho ukubuyela emva ikope eso sisombululo, siyithengise njengeyabo?
Agasti 18, 2011 ngo-6: 24 PM
Ndicinga ukuba siyavuma. Inqaku lam koku kukuqinisekisa ukuba unekhowudi kwaye ungaphuma emnyango ngayo. Ukuba umphuhlisi wakho uqokelela ikhowudi yakho kwaye uyikhuphela kwindawo yakho- awunayo ikhowudi. Ndikubonile oku kusenzeka ngayo yonke into ukusuka kwimizobo, iFlash, .NET, Java… nantoni na efuna ifayile yomthombo kwaye ikhutshiwe.
Meyi 13, 2008 kwi-5: 53 PM
Ndiyabona apho uvela khona kwaye ngelixa ndingavumelani nayo yonke into eyi-100% (ndinemiqolomba), iinkampani kufuneka zihlale zikhumbula oku.
1. NGOKUPHELELEYO. Awunakucinezeleka ngokwaneleyo. Ndisebenze kwinkampani encinci eyenze le nto kwaye ndaziva ndiziva ndinetyala ngenxa yokubandakanyeka. Ndonwabile ukuba ndikwazile ukuphuma apho. Abathengi kufuneka bagcine ngokupheleleyo ulawulo lweendawo zabo. Ukuba banomntu onolwazi ngokwaneleyo, musa ukunika umphuhlisi ukufikelela koku. Ukuba akukhange kubenjalo, qiniseka ukuba umphuhlisi unendlela yokuba utshintshe ulwazi / udlulise i-domain ngokudibanisa umthengisi ngolunye uhlobo kokuncinci.
2. Ndingavuma ngokuyinxenye koku kodwa ke kuya kuxhomekeka kwimeko. Ukuba uhambisa usetyenziso olulula lwe-PHP kwaye ufuna ukusingathwa kweendleko eziphantsi, ngeendlela zonke, fumana i-LunarPages okanye i-akhawunti ye-DreamHost okanye enye into kwaye uyilahle apho. Nika ukufikelela kumqambi. Nangona kunjalo, ukusingathwa okwabiwa ngexabiso eliphantsi ngokuqinisekileyo kunemiqobo… ngakumbi kwizinto ezinkulu. Kodwa ukuba umkhulu ngokwaneleyo ukuba ungakhathazeka malunga nokuba kuya kufuneka ube nomntu wobuchwephesha kubasebenzi abanokujongana nayo. Uninzi lucacile malunga nokuthembana. Ngokuqinisekileyo isihogo sibeka into kwisivumelwano ukuba unakho malunga nolu hlobo lwezinto (izithintelo kunye nokunye). Ukubamba iqela lesithathu kulungile ukuba umphuhlisi akadingi kwenza nantoni na emnandi. Ndiyavuma ndikrazukile kuba iyinto yokwenene. Kuxhomekeke kubungakanani besiza, uluhlu lweetekhnoloji ezisetyenzisiweyo. Ukuba iya kuba nkulu, ucinga ngokuqesha umntu kubasebenzi. Ayisoloko ikhetha, kodwa ikhuselekile kwizinto ezinkulu.
3. Le yinto eyayisenziwa yinkampani yam yangaphambili. Ungashiya, baya kukunika i-HTML, imifanekiso njl. kodwa akukho khowudi. Ikhowudi yayiyinkonzo yokuqeshisa ngokusisiseko. Oko kuthethiweyo, kukho ukuba ngumnini kunye nokuba ngumnini. Ndihlala ndisenza intengiso engakhethiyo. Ngokusisiseko, kufuneka ndibenakho ukusebenzisa kwakhona izinto zam. Andinawo umba wokuba ngumnini wayo, ndenze oko bafuna ukukwenza nayo kwaye omnye umntu asebenze kuyo ezantsi ... kodwa andizukuzibambisa ngokwam kwaye kufuneka ndibuyisele ivili ngalo lonke ixesha.
Meyi 18, 2008 kwi-5: 48 PM
Iposi entle… yenziwe kakuhle nangona ndingavumelani nento enye (# 2):
"Kulungile ukuba umphuhlisi wakho abe nenkampani yokubamba kwaye akwazi ukusingatha indawo yakho, kodwa ungayenzi."
Nangona ndiyiqonda ingqiqo emva koku, inokuba nemveliso ngokuchaseneyo namaxesha okuyalela ukuba iprojekthi yakho isingathwe kwenye indawo. Ukuba inkampani ephuhlisa indawo yakho okanye usetyenziso lwayo ineqonga lokusingathwa abakhetha ukulisebenzisa, amathuba aya kusebenza ngakumbi kwaye abe nemveliso kubo ukuba bayisebenzise.
Ukongeza, ngokwembono yefilosofi, ukuba uyala ukusebenzisa iqonga lomphathi wakho ngenxa yokuba awufuni "ukubanjwa", ke oku kuseta ithoni yokungathembeki kwasekuqaleni. Ukuba awumthembi umphuhlisi wakho ngokwaneleyo ukuba ubamkele, ngaba uyafuna ngenene ukusebenza nabo kwasekuqaleni?
Ndiyazi ukuba amabali amaninzi oyikisayo akhona malunga nale meko, kodwa ngokubanzi ndingacebisa ukuba ujolise ekufumaneni umphuhlisi omthembileyo. Ungasebenzisa ukubamba komphuhlisi wakho kwaye uzikhusele ngokucela ukufikelela kulawulo kunye nokwenza i-backups zakho.
Kwakhona, iposti elungileyo kunye nolwazi oluluncedo kakhulu.
Meyi 19, 2008 kwi-8: 56 AM
Ingavakala njengengxaki yokuthembela kodwa andiqondi ukuba yiyo- ngumcimbi wolawulo noxanduva ngenene. Ukuba uza kutyala imali ebonakalayo kuphuhliso lwewebhusayithi yakho, kuya kufuneka uqiniseke ukuba uyakwazi ukulawula imeko-bume.
Izinto zenzeka kwishishini ezophula ubudlelwane kwaye akufuneki ukuba zibe mbi. Mhlawumbi umphuhlisi / inkampani yakho ifumana umthengi omkhulu kakhulu kwaye ayinakukufumana ixesha. Mhlawumbi bayazitshintsha iinjongo zeshishini. Ngamanye amaxesha inkampani yabo yokubamba inokuba nemicimbi.
Ndikhuthaza ukuba ulawule kwaye ube noxanduva lokusingathwa kwakho ukuze uxhomekeke kumbhekisi wakho kwinto ayithandayo-ekuphuhliseni!
Ndiyayixabisa i-push-back, uMichael.
Agasti 19, 2011 kwi-12: 43 AM
Ndingumphuhlisi weapp, kwaye ndicinga ukuba ubethile isikhonkwane entloko. Ezinye iingcinga:
Ndicinga ukuba wonke umntu angavuma (kwaye usekwe kwizimvo ezingezantsi) # 1 yinto eyiyo. Ungaze, wenze njalo. Ngonaphakade. Ngaphantsi kwayo nayiphi na imeko.
Ndithathe okwahlukileyo # 2 kunokuba abanye babaphuhlisi endisebenza nabo: siyala ukusingatha imveliso yokugqibela yabathengi bethu (ewe, sisingatha iserver yokuvavanya abathengi ukuba bavavanye ukuqhuba imveliso ngexesha lophuhliso). Siyavuya ukunceda abathengi ukuba babeke ukusingatha ngokwabo okanye bafumane umboneleli wokubamba. Asifuni nje ukungena kwishishini lokubamba. Ukuba oko kuthetha ukujika umsebenzi, makube njalo. Zininzi iinkampani ezininzi zokubamba okanye iifemu zeziseko zophuhliso ngaphandle apho zinokubonelela ngale nkonzo ngexabiso eliphantsi kakhulu. Sikhuthaza ukuphatheka komsebenzi wethu, kwaye siya kwenza nantoni na esinokuyenza ukunceda ukuba uwusingathe, nokuba umthengi utshintshela ababoneleli iminyaka ezantsi kwendlela.
Kwi # 3, abathengi bethu bafumana yonke ikhowudi yemvelaphi yemveliso yokugqibela ngomqolomba omnye: Kwiimveliso zomntu wesithathu ezisetyenziswa kwisisombululo (njengolawulo lwewebhu oluvela kwiTelerik okanye kwiCandelo lokuQala), sinokunika umxhasi idilesi ehlanganisiweyo ulawulo lomntu wesithathu (yithi igridi). Izivumelwano zethu zokulayisensa kunye neenkampani zomntu wesithathu (esizibonelela kumthengi) ziyasithintela ekusasazeni kwakhona ikhowudi yemvelaphi kolo hlobo lolawulo, kuba lilungelo lomenzi wesithathu, hayi elethu. Ukusetyenziswa kwezi ntlobo zeemveliso konga ixesha lokuphuhliswa komthengi kwaye kubiza kakhulu kunokwakha ukusebenza okufanayo kwasekuqaleni. Siphambili ngalo mgaqo-nkqubo ngaphambi kokuba kwenziwe nawuphi na umsebenzi. Ewe, ukuba umthengi unqwenela ukuhlawulela uphuhliso lolawulo lwesiko (endaweni yokusebenzisa imveliso eyakhiwe kwangaphambili evela kumntu wesithathu) sinika ikhowudi yemvelaphi yolawulo lwesiko kunye nayo yonke into.
Xa kuziwa ekusetyenzisweni kwakhona kwekhowudi, siphambili malunga nenyani yokuba sinokuphinda sisebenzise ezinye iinxalenye zekhowudi ngaphandle kokuba iphuhliswe ngokukodwa kusetyenziselwa umthengi (yitsho ngenkqubo yeshishini) ngaphambi kokuba kwenziwe nawuphi na umsebenzi. Ukuba umthengi ufuna ukuba nekhowudi eyodwa iphuhliswe kunjalo, iyafumaneka kubo.
Njengoko abanye besitsho, # 4 ihlala icetyiswa. Soloko!